Turkey AVM Markii aan la Dhaqanka hor imanaya? | RayHaber | raillynews
HomeGUUDTurkey AVM Markii aan la Dhaqanka hor imanaya?
xarumaha shopping ugu weyn turkiyenin
dhaqanka Mall for Turkey ugu horeysay bilaabay in 1987 la Galleria Mall ee. Wareegtadan ayaa sii socota iyadoo Capitol AVM la furay 1993.
Turkey 14 ugu weyn AVM'si
Suuqyadan wax laga iibsado aad ayey u weyn yihiin. Waxaad dareemi kartaa naftaada adduunyo ka duwan xitaa markaad booqanayso suuqyadan dukaamaysiga oo aad marin ugu heli karto alaabta guryaha, qalabka guryaha, carruurta, haweenka, dharka dhalinyarada, qalabka guryaha, qurxinta iyo noocyada gaarka loo leeyahay. Dhammaantood waxay leeyihiin fikrad ka duwan oo waxay raalli ka yihiin dad badan oo haysta cunnadooda iyo cabbitaannadooda.
Madasha Istanbul: Suuqa dukaameysiga ee bilaabay inuu adeego 2009; Waxaa lagu aasaasay aag dhan 176.384 mitir murabac. Waxaa la ogsoon yahay inay jiraan dukaamo badan oo maxalli ah iyo kuwo dibadeed iyo goobo madadaalo oo ku yaal suuqa weyn ee ku yaal gobolka Bayrampaşa.
Mall of Istanbul: Meesha ay dhistay Torunlar REIC; Waa aag aad u ballaaran oo u adeega sida xafiis, deggane, hoteel iyo suuq laga dukaamaysto. Waxay ku adeegtaa aag 154.457 mitir murabac ah.
Fagaaraha Emaar: Suuqa dukaamaysiga ee ku yaal gobolka Libadiye halkaasoo ay ku yaallo sumado badan oo shisheeye; Waxay sidoo kale soo jiidataa dareenkeeda leh aquarium-ka. Waxa kale oo ku yaal meelaha wax laga cuno iyo kuwa wax lagu cabbo ee ku dhex yaal suuqa weyn, oo aad u badan.
Xarunta Ganacsiga Marmara: Xaruntu dukaamaysiga, oo shaqaysay ilaa 2011, waa suuq laga dukaamaysto oo leh aquarium isla markaana caan ku ah xarumaha madadaalada oo waliba leh sumado fara badan.
Galleria 2: Xarunta wax laga iibsado ee Ataköy, oo loo arko qaybta labaad ee Galleria, waxay ku jirtaa qaab ay qof walba ku raaxeysan karto.
Ankamal: Xarunta Ganacsiga Tani waxa uu ku yaalaa ee Ankara Yenimahalle iyo xarunta ganacsiga ugu weyn 6aad Turkiga, Waxay shaqaysay ilaa 1999. Waxay leedahay qaab-dhismeed aad u gaar ah. Aagga ah 120.000 mitir oo laba jibaaran, laakiin qaab ah si joogto ah u cusbooneysiisa laftiisa.
Xarunta Ganacsiga Cevahir: Waxaa loo furay adeegga 2005; Waxay ku dhisantahay dhul dhan 117.574 mitir murabac.
Vialand: Suuqa dukaamaysiga oo ku yaal barta dulucda mawduuca waxaa lagu aasaasay meel u jirta 110.000 mitir murabac. Waa macquul in laga helo noocyo badan oo halkan oo lagu madadaalo beerta dulucda. Waxa kale oo jira gudaha baarkin madadaalo.
Xarunta wax laga iibsado ee Vadistanbul: Mashruuca koowaad iyo ugu weyn dalka Turkiga ayaa isku qasan oo la odhan karaa AVM ah. Aaggan, oo la isku keenay guri, xafiis, suuq laga dukaameysto iyo jidadku, waxay u adeegaan sidii dhismo ballaaran.
xumeeyayna TheWestgate Tani waxay ku listesiiçeri ugu weyn ee Westgate ee Turkey in ay ahayd natiijo lama huraan ah xarumaha adeeganayay waa mid ka mid ah meelaha ugu badan ee soo gaaray. Waxaad ka heli kartaa dukaamo badan oo muhiim ah dharka dharka iyo waxyaalaha la isku qurxiyo ee laga dukaameysto.
Xarunta Maaliyadda ee IstanbulDukaan Suuqan; Waxay leedahay qaab ay kujirto xarumaha xarumaha muhiimka u ah qaab dhismeedkeeda. Waxaa jira xarumaha adeeganayay on xarunta adag ee astaanta ah taas oo ah mid aad muhiim u ah Turkiga.
Xarunta Iibka ee Magaalada 'Metropol Istanbul Torium Shopping': Dukaameysiga Suuqa iyadoo lala kaashanayo Varyap - Gap; waxay u adeegtaa sumado gaar ah. Waxaa la ogyahay in xarunta wax laga iibsado, oo leh noocyo badan oo muhiim ah, qofwalbaa u adeegsada waqtiga.
Torium AVM: Suuqa Dukaameysiga, oo ka shaqeynayay gobolka Istanbul Esenyurt ilaa iyo sanadkii 2010; Waa xarunta ugu dukaamaysiga badan ee ay booqdaan dalxiisayaasha maxalliga ah iyo kuwa shisheeyeba.
Joojinta Park AVM: Dukaan A kala duwan oo leh qaab boutique ah. Waxa kale oo jira meelo lagu madadaasho oo laga dukaameysto, halkaasoo ay ku yaallo sumado waaweyn iyo noocyo kala duwan. Waxaa jira xulashooyin badan oo kaladuwan oo ah cunidda iyo cabbidda.
Degmada Incirliova "Dhaqanka Nolosha by Mashruuca Tareenka" ayaa la fuliyey.
Ma jiraan wax dhaqameed oo ka baxaya gaadiidka
Dhinaca Anatolianka iyo dhaqanka metro
Muuqaal sawireed ee Eskisehir dhaqdhaqaaqa sawirada (Video)
Bandhiga Dhaqanka ee Cimilada Caan ka ah Eskisehir
Barnaamijka Waxbarashada Dhaqanka iyo Tacliinta Taariikhda ee Izmir ayaa dib u bilaabaya
Madaxweynaha Aktaş Asphalt Shaqaalaha Ayaa Sameeyay Sahur
Kutahya Gaadiidka si ay ula kulmaan Xirmada Basaska
Konyalılar waxay la kulantay codsi waddo oo la taaban karo markii ugu horeysay
Buuraleyda yaryar ee buurari waxay la kulmaan barafka
Tuzlali ayaa la kulmay tareenka nostalgic
Demre waxay kulmaysaa asfalt kulul